LED ဖလက်ရှမီး, LED မီးစခန်းအလင်း, LED မီး Headlamp လက်ကား - Liveolight.com
LED ကို Headlamp
လက်ဆောင်ပေးမယ် & မြှင့်တင်ရေးအလင်း
မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် 130 Lumens 2AAA ဘက်ထရီ Penclip နှင့်အတူဖလက်ရှမီး
တစ်ခရီး XP ကို-E2 R2 LED ကို 130 lumens အထိအများဆုံးထွက်ရှိအတူအသုံးချ။2အတူ 3xAAA alkaline များဘက်ထရီများကိုအားဖြင့် Powered ...
2xCR123A IPX7 500 Lumens သံလိုက်ထိန်းချုပ်ထားဖလက်ရှမီး
♥သံလိုက်ထိန်းချုပ်ထား switch ကိုကအဆင်ပြေသင်6Modes သာပြောင်းလဲပစ်ရန်စေသည်။ ♥တစ်ခရီး XM-L2 U2 LED ကို, အသုံးချ ...
Keychain နှင့်အတူ Mini ကိုလူမီနီယမ် 1AAA ဘက်ထရီမှန်ဘီလူးဖလက်ရှမီး
♥တဦးတည်းလက်ဖြင့်သာအာရုံစိုက်ဖို့ defocusing ကနေ zoom ကိုမှဦးခေါင်းကိုဆန့်။ ♥တစ်ခရီး MLE LED ကိုအသုံးချ ...
1000 Lumens 9xAA ဘက်ထရီခရီးကို LED မှန်ဘီလူးဖလက်ရှမီး
♥အာရုံစိုက်ဖို့ defocusing ကနေ zoom ကိုမှဦးခေါင်းကိုဆန့်။ ♥အများဆုံးထွက်ရှိနှင့်အတူတစ်ခရီး XM-L2 T6 LED ကိုအသုံးချ ...
IPX8 waterproof 4AA ဘက်ထရီခရီးကို LED 10m ရေငုပ်ဖလက်ရှမီး
သင်လက်နှိပ်ဓာတ်မီးနှင့်အတူ 8 မီတာ၏အတိမ်အနက်ကိုမှငုပ်နိုင်ပါတယ်♥ IPX10 ရေစိုခံနည်းလမ်းများ။ ♥တစ်ခရီးအသုံးချ ...
လူမီနီယမ် 2AA ဘက်ထရီ Penclip နှင့်အတူခရီးကို LED Project ဖလက်ရှမီး
စိတ်ကြိုက်ပုံစံများနှင့်အတူ♥ Project မြှင့်တင်ရေးလက်နှိပ်ဓာတ်မီး, ။ ♥2နာရီ runtime ကအတူ 7xAA alkaline များဘက်ထရီကတော။ ♥အမြင့်ပြင်းထန်မှု ...
သငျသညျမဆိုမေးခွန်းများရှိပါကစျေးနှုန်းစာရင်း, ဗီဒီယိုများ, ပုံများစသည်တို့ကိုသည်ဆက်သွယ်ရန်, ကြှနျုပျတို့ကိုကိုသိပါစို့ပေးပါ။ ကျနော်တို့ 12 နာရီအတွင်းမှာပဲသင်က Reply မူမည်
STARLITE ကျနော်တို့ဇန်နဝါရီ 2009 ၌တည်ထားတဲ့လက်ကမ်းအလင်းကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့လုပ်နေတာနှင့်တိုးတက်မှုများစောင့်ရှောက်ခြင်းအားဖြင့်သင်ယူကြသည်။ ဒါကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည် '' လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်စဉ်းစားရပ်တန့်ခဲ့ပါဘူး။ ကျနော်တို့ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာအလင်းရောင် tools တွေလုပ်နေတာ။ ကျနော်တို့အမှန်တကယ်သုံးပြီးလိုအပ်ချက်အားဖြင့်ထုတ်ကုန် oninnovating နှင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးကိုအာရုံစူးစိုက်။ ကျနော်တို့မီးသတ်သမား, အာမခံ, မုဆိုး, တံငါ, ပြင်ပချစ်သူများ, အားကစားနိူး, စခန်းချနေထိုင်မည့်နှင့်ဥယျာဉ်ကိစ္စများအတွက်အသုံးပြုသူများ၏အတွေ့အကြုံနှင့်ခံစားချက်ဂရုစိုက်။ ကျနော်တို့အသစ်သောအတွေးအခေါ်များမှဦးဆောင်သောသူအပေါင်းတို့သည်စစ်မှန်သောကမ္ဘာအတှေ့အကွုံဂရုစိုက် ...
အကောင်းဆုံးအစွမ်းထက်ဓာတ်မီး SFL-A176N ဖြစ်ပါသည်
အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦး Headlamp Buy?
Ingress ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးခဲ့သည် Rating
300 ဓာတ်မီးလူကြိုက်များ rechargable chargeled3သည် Modes ကားတစ်စီး lumens
quick အသေးစိတ်အမျိုးအစား: ဖလက်ရှမီးအလင်းရင်းမြစ်: LED မီးကို LED အလင်းရင်းမြစ်: ခရီး XP ကို-G2 R5 * 1 ဖလက်ရှမီးအမျိုးအစား: မူလအစ၏ Rechargeable ဖလက်ရှမီး Place: Zhejiang, တရုတ် (ပြည်မကြီး), ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်: ဓာတ်မီးဦးဆောင်အားပြန်သွင်းနိုင်လူကြိုက်များမော်ဒယ်အရေအတွက်: SFL-1658 ဓာတ်မီးကိုဦးဆောင် အားပြန်သွင်းနိုင်လူကြိုက်များဘက်ထရီအမျိုးအစား: 16340 Li-ion 600mAh အသုံးပြုမှု: အရေးပေါ်ပါဝါရင်းမြစ်: Rechargeable ဘက်ထရီ Lighting ကာလ (ဇ): ...
1500 lumens ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်မြင့်မားသောပါဝါ Lite ဦးဆောင်တဲ့လက်နှိပ်ဓာတ်မီးကိုဦးဆောင်
မူလအစ၏လျင်မြန်စွာအသေးစိတ် Place: Zhejiang, တရုတ် (ပြည်မကြီး), ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်: ပါဝါကိုဦးဆောင်လက်နှိပ်ဓာတ်မီးမော်ဒယ်နံပါတ် Lite: SFL-A176N ပါဝါကိုဦးဆောင်လက်နှိပ်ဓာတ်မီးကုန်ပစ္စည်းအမည်ဖြင့် Lite: ပါဝါကိုဦးဆောင်လက်နှိပ်ဓာတ်မီးဘက်ထရီအမျိုးအစား Lite:3*: D Output Power: 13.5W အရောင် Temp: 6400K အလင်းအားမုန်တိုင်းအဆင့်: 100% -1500lm 50% -700lm 25% -350lm Flash ကို-1500lm အရေးပေါ်-1500lm Beam ကိုအဝေးသင်: 100% -370m 50% -244m 25% -86m သက်ရောက်မှုခုခံ: ...
တစ်ခရီး XP ကို-E2 R2 LED ကို 130 lumens အထိအများဆုံးထွက်ရှိအတူအသုံးချ။2နာရီ runtime ကအတူ 3xAAA alkaline များဘက်ထရီကတော။6ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များကိုရရှိနိုင်သငျတို့သလည်းသင်အကြိုက်ဆုံးအရောင်ကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။ မြင့်မားသောပြင်းထန်မှု penclip, သံ လုပ်. electrophoretic အပြောင်းအလဲနဲ့, သင်ဖြစ်ကြ၏လမ်းကိုက်ညီ။ မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် 130 ...
2009 စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, STARLITE ဖလက်ရှမီး LIMITED ခရီးဆောင်အလင်းရောင်၏သုတေသနဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အထူးပြုတဲ့ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ကုန်သည်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များအားလုံးသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရည်အသွေးကိုစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီခြင်းနှင့်အလွန်ကမ္ဘာအနှံ့ကွဲပြားခြားနားသောစျေးကွက်အမျိုးမျိုးအတွက်တန်ဖိုးထားကြပါတယ်။
suite 1, အဆောက်အအုံ No.9, No.215 Yaohua လမ်း, Pudong, ရှန်ဟိုင်း, တရုတ်
2009 ® STARLITE ။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။
Hangheng.cc အားဖြင့် Powered | XML ကိုမြေပုံအညွှန်း